नरिवलको तेलले कसरी मोटोपना कम गर्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
नरिवलको तेलले कसरी मोटोपना कम गर्छ ?
मोटोपनाको समस्या समाधानका लागि मानिसहरु विभिन्न तरिकाको खोजी गरिरहेका हुन्छन्। कसैले डाइटिङ गर्छन् भने कसैले खानपानमा परहेज गर्छन्। तर मोटोपनाको समस्या समाधान गर्नुछ भने काचो नरिवलको तेल प्रयोग गर्नुपर्छ।
साधारण खालको तेलमा बढी मात्रामा चिल्लोपदार्थ हुन्छ, जो शरीरमा जम्मा भएर मोटोपना बढाउँछ। तर नरिवलको तेलले मोटोपना नियन्त्रण गर्छ। नरिवलमा भएको खास विशेषताले यो शरीरमा जम्मा हुँदैंन र उर्जा दिनमा उपयोगी हुन्छ।
यसले कसरी मोटोपना कम गर्छ ?
यदि नियमित रुपमा र सही तरिकाबाट काचो नरिवलको तेल प्रयोग गरिन्छ भने एक महिनाभित्रै पौने ३ किलोसम्म तौल कम गर्न सकिन्छ। तेल शरीरभित्र जानेबित्तिकै कोशिकाहरुलाई पोषित गर्न सुरु गर्छ। यसबाट चिल्लोपदार्थ तत्काल शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ र शरीरमा जम्मा भएर बस्न पाउँदैंन।
दिनभरि खाएको खानामा खराब खालको चिल्लो पदार्थ पनि हुन्छ। यो शरीरमा जम्मा हुन्छ र मोटोपना बढ्न थाल्छ। काचो नरिवलमा पाइने चिल्लो भने अन्य खानामा पाइने चिल्लोभन्दा लाभदायी हुन्छ।
जब हामी काचो नरिवलको तेलमा बनाइएको खाना खान्छौं, यो सिधै कलेजोमा पुगेर कोशिकामा फैलन्छ र चिल्लोपदार्थका कणलाई आफूतर्फ तान्छ। कोशिकामा पुगेर यो चिल्लो तुरुन्त शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ।
नरिवलको तेल सजिलै पच्छ, किनभने यसमा कम फ्याटी एसिड पाइन्छ। नरिवलको तेल मध्यम खालको ट्राइग्लिसराइड लोरिक एसिडबाट बन्छ, यो एक आवश्यक फ्याटी एसिड हो। यस्तो ट्राइग्लिसराइडले शरीरको मोटाबोलिज्म बढाउँछ, जसले फ्याटी एसिडलाई उर्जामा परिवर्तन गर्छ। हरेक दिन आफ्नो खानामा दुईदेखि तीन ठूलो चम्चा उपभोग गर्न सकिन्छ।
नरिवलको तेलमा खाना खानाले चाँडो भोक लाग्ने समस्या पनि हट्छ। यसमो कार्बोहाइड्रेट र अधिक क्यालोरी हुन्छ । यिनै तत्वले भोक नियन्त्रण गर्छ।
यदि तपाईंको लक्ष्य दैनिक रुपमा प्राप्त हुने क्यालोरी कम गर्नु छ भने नरिवलको तेल उपयोगी हुन सक्छ। यसले पाचन प्रणालीलाई ठीक राखी क्यालोरी कम गरिदिन्छ। यो प्रक्रियाको माध्यमद्वारा शरीर खाना पचाउने र पोषकतत्व ग्रहण गर्ने र भोकलाई नियमन गर्ने काममा मद्धत गर्छ।
हर्मोन असन्तुलनको समस्या भएका मानिसमा तौल बढ्ने समस्या सबैभन्दा बढी देखिन्छ। नरिवलको तेलमा बनेको खाना खानाले ब्लड सुगर नियन्त्रित गर्छ।
तौल बढाउन भूमिका खेल्ने क्याडिडा यीस्टलाई नियन्त्रण गर्छ। यदि तौल नियन्त्रण गर्नु छ भने दिनहुँ नरिवलको तेलमा बनेका खाना खानुका साथै एक चम्चा नरिवलको तेललाई तातो पानीमा मिसाएर शारीरिक अभ्यास गर्नुअघि पिउनुपर्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 44 = 45